Idesktop yeSuperGIS, uthelekiso oluthile ... -Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Idesktop yeSuperGIS, uthelekiso oluthile ...
I-SuperGIS iyinxalenye yomzekelo Supergeo endithetha ngayo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ngempumelelo entle kwilizwekazi laseAsia. Emva kokuyivavanya, nazi ezinye izinto endizenzileyo.
Ngokubanzi, yenza malunga nayo nayiphi na enye inkqubo ekhuphisanayo. Inokuqhutywa kuphela kwiWindows, kunokwenzeka ukuba iphuhlisiwe kwi-C ++, ke ibaleka ngesantya esihle kakhulu; nangona oku kuzisa ukungalungi kokungabikho kwiqonga elininzi ... ingxaki esombululwe ngabanye kakhulu ngendlela.
Ngokwenkangeleko, iyafana ne-ESG's ArcGIS, enesakhelo sokudada kunye nesokuma, ukuhlelwa ngokwamaqela, ukutsala kunye nokuwisa. Ngaphezu, ubhalo lokwakha kunye scalability iphawulwe kakhulu ukugcina ukukhuphisana nale modeli; yintoni enokubonakala kulwandiso lwayo oluphambili:
Uhlalutyo lwendawo, iNethiwekhi, i-Topology, iStatical Stadystical, i-3D, i-Analyst biodiversity.
Ukongeza, kuyongezwa nezicelo ezifakwe kwinguqulelo yedesktop: Umphathi weDatha yeSuperGIS, elingana neArcCatalog kunye neSuperGIS Converter, elingana neArcToolbox.
Nala zokwakha project iifayile XML zemveli ngolwandiso .sgd abe .mxd / .apr kwi ArcGIS okanye .gvp gvSIG. Akukho ulwandiso ukungenisa iprojekthi kwenye inkqubo GIS yaye ngeli thuba ingqiqo ibonakaliswa ukusuka phezulu ukuya kwi indlela yokufunda le ncwadi iiprojekthi IMS, ikwaxhasa data ngaphakathi Personal Geodatabase (MDB), Kumncedisi we SQL MS, Oracle lweMihlaba Server PostgreSQL.
Ifom ye .sgd ineentshintsho ezibini ezibalulekileyo; enye yangoku ukusuka kwi-3.1a ingeniso ingenisa yangaphambili ukusuka kwinguqu ye-3.0.
Kwifom ye vector:
DWG, ukuya kwiinguqulelo ze-2013
Yonke into ibonakala iyinto eqhelekileyo kwizinto ezinye izixhobo ezenzayo, nangona apha kubonakala ukuba iifom ze vector dwg, dgn, dxf zibona iinguqulelo zakutshanje.
Andazi ukuba bazokuyiphumeza njani, kodwa bobunye bobuthathaka be-GIS e-Manifold, i-gvSIG kunye nenye isoftware yomthombo ovulekileyo. Kwimeko yefayile ye-dgn / dwg, ivumela ukuyicacisa, ukuyicima, ukuyivula, nangona kungumaleko kuphela (inqanaba), nangona ilayishwe kuphela njengesalathiso; ukuyihlela, kuya kufuneka uyithumele kwelinye ilizwe ukuya kwifomathi yegeo okanye .shp. Kuyathakazelisa ukucacisa ukuba ifomathi ye-geo ixhasa kuphela ipoligoni, i-polyline kunye nenqaku; i-multipoint ixhaswa kuphela yi .shp xa kusenziwa umaleko omtsha.
Funda iMicrostation dgn kwinguqulo 8 kunye ne-AutoCAD dwg kuhlobo luka-2013… ifanele ikhredithi. Nangona i-gvSIG inenzuzo yokuba ingahlela i-dwg, i-dxf kunye ne-kml, ngelixa i-SuperGIS inokuhlela kuphela i-shp kunye nefomathi yayo yokwandiswa kwegeo. Enye ifomathi yelungelo lokufaka ilayisenisi yi .slr (Ifayile yeSilayidi yeSupergeo), enokusetyenziswa kunye namacwecwe kusetyenziswa iSuperSurv, kunye nakwiklayenti yedesktop.
Ukusuka kwi-SuperGIS Data Converter ungenza ukuguqulwa phakathi kweefom zangaphambili, kubandakanywa iifomati kml (Google Earth), e00 (ArcInfo), i-sef (Standard Exchange Format).
Kwifomathi ye rasta:
I-SGR, enefomathi yecala leSGGIS
Ifomathi ye-.sgr i-Supergeo; kunye nale miqhubi kwijubane elikhangayo kokubili ukuthunyelwa kunye nenkcitho ekhethekileyo kunye ne-Image Analyst.
Inengxaki yokuba ayifundanga i-ENVI, iifayile ze-SPOT ezixhaswa ziinkqubo ezinje nge-Manifold GIS kunye ne-gvSIG. Ubuchule bomfanekiso we-georeference buqhelekile kwinto eyenziwa yi-gvSIG / ArcGIS.
Ukusuka kwiSuperGIS Data Converter unokwenza utshintsho phakathi kweefomathi img, gis, lan (Erdas), tif, ecw, sid, jpg, bmp, kunye ne-ASCII txt.
I-WMS (inkonzo yemephu yewebhu)
I-WFS (inkonzo yenkonzo yewebhu)
IWCS (inkonzo yokufikelela kwiWebhu)
IWMTS Le yifomathi yokuphathwa kwedatha yemifanekiso (iileyile)
Oku kunye nezinye iimpawu aziza kunye ne-download version, zongezwa njenge-add-on: I-OGC Client, GPS, Geodatabase Client, Client Desk Client kunye neKlayenti ye-Desktop Client Client.
Ityala lefomathi ye-kmz ixhaswa kuphela ngolwandiso lwe-3D Analyst. Kwimeko yeefomathi zenethiwekhi, zixhaswa yi .geo, ukubanakho ukungenisa usebenzisa iDataConverter evela kwiifayile zobume, kunye nedatha yendawo yedijithali enokungeniswa kwiifayile zobume kunye ne-sgr.
Eli candelo lisoloko lithathe ingqalelo yam, ethi isibangele ukuba sisebenzise inkqubo yeCAD ukwakha idatha kunye nenkqubo ye-GIS xa sele isebenza. Yinto ebalulekileyo kwangaphambili ukuba uye waba ne-gvSIG kunye ne-Quantum GIS kule nkalo, kubandakanywa iipakethi ezongezelelweyo njengoko kunjalo Izixhobo ze-OpenCAD apho singasayi kukhononda khona.
Kwimeko yeSuperGIS, ivumela ukuhlelwa kolungelelwaniso olunye okanye nangaphezulu, kwisitayile sendabuko. Abo banezandiso ze .geo kunye .shp bayaboniswa, ungagcina kwaye uyeke ukuhlela. Ukongeza, kwithebhu enye, ukusetyenziswa kokuhlelwa okuqhelekileyo kuyabonakala, phakathi kwayo kungqinelana nephalethi ye-gvSIG:
Masibone ukuthelekiswa kwezixhobo ze-CAD ezenza i-AutoCAD, i-gvSIG kunye ne-SuperGIS, ngokuqwalasela uluhlu lwam oludala lwemiyalelo ekhethiweyo ye-AutoCAD.
Hayi. Myalelo AutoCAD GvSIG SuperGIS
23 E fanayo
Eyokuqala 14 (1 ku-14) bekunoluhlu lwam I-25 imiyalelo esetyenziswayoEzinye zazo azifani ngokulinganayo, ezifana: - ujoyine / wenze ibhloko
-i-autopolygon / umda Apha, kuyaphawuleka ukuba amaqela e-SuperGIS angaphezu kweyodwa kumyalelo omnye, ovela kwimeko yomxholo, njengakwimeko ye "Sketch" ebandakanya umgca, i-polyline, inqaku kunye ne-multipoint.
Umyalelo wokuhlela ama-geometry amaqela e-editing vertex, esolula, ukulinganisa okulinganayo.
Akukho miyalelo siyisebenzisileyo kwi-CAD, enje ngeArray, ipoligoni rhoqo, ellipse. Ukuziqhelanisa azingxamiseki kangako, nangona i-gvSIG ibadibanisile njengenxalenye yokwenza into ebalulekileyo kwi-CAD.
Yandisa kunye neParallel Copy ume ngaphandle. Kananjalo nomyalelo wokuhambisa ovumela ukungena kwindawo yokulungelelanisa.
Ukusebenza kubonakala kusebenza, kubonakala ngathi iSuperGIS yeza nomsebenzi omninzi osebenzayo kunye nabasebenzisi bokwenyani. Kwimeko yokuchaneka, kukho iinketho ze-snap zaphakathi, isiphambuka, kunye nenqaku elikufutshane. Ngelixa linokuqwalaselwa ukuba lisetyenzisiwe kwimiphetho okanye i-vertices ngokunyamezelana okuthile kunye nolwaleko ngalunye.
Ngemiyalelo edadayo kwiifestile ziphakanyisiwe; Ingadalwa kumakhonkco, umgama / ukuzala, umgama / umgama ... nangona kwezinye kuye kwabonakala ngathi kuyamangalisa ukusebenza kum ... kufuna ukuziqhelanisa njengesixhobo esitsha.
Ukongezelela, imiyalelo efunekayo kwiinkqubo ze-GIS ziyacaca, ezazingenalo umdla omkhulu kwi-CAD, njenge:
Icandelo (lahlulwe), Icandelo le-vertex, Generalize, Smooth (egudileyo), ixhaphake kakhulu kumsebenzi we-GIS. Ukongeza kwiinkqubo eziqhelekileyo ze-geoprocessing eziphantse zayikopi / uncamathisele kwinto esele siyazi.
Kwinqanaba lobeko lokushicilela, ndiza kuyilungisa kwinqaku elilandelayo; kuba ndinendawo yam yokubhukisha kwaye bendizakulinda ngelo xesha ukuze ndibenokuphuhliswa kwe-multiframe abasebenza kuyo, apho ndacebisa ukubakho kokugcina imixholo, ukuze ndikwazi ukulayisha iifayile zeedatha ezahlukeneyo kulwakhiwo olunye. Ndithenjisiwe ukuba ndiza kuba nale SuperGIS Desktop 3.1b kwi-Q2013 XNUMX; ngokufanayo nento eyenziwa yiCadCorp okanye i-Manifold GIS.
Ekugqibeleni, kubonakala ithuluzi elinamandla kwi desktop ye-GIS.
Kwabo bafuna ukuzama,
Lapha ungalanda ideskithophu ye-SuperGIS
Iimvulophu ezingezizo ezobuchwephesha
Siyabonga ngolwazi.- Ukukhuphela kwaye uzame!